🥇 ▷ Ku bilow barnaamijyada shaashadda iPhone qufulka leh BerryC8 ✅
Ku bilow barnaamijyada shaashadda iPhone qufulka leh BerryC8
Iyada oo la adeegsanayo BerryC8 waxaad ka furi kartaa barnaamijyada aad kahesho shaashadda iPhone qufulka
Haddii aad rabto si toos ah ugu bilow barnaamijyada aad ugu jeceshahay shaashadda qufulka ee iPhone-kaaga Jailbreak, ka dib ma seegi kartid tweak-ka BerryC8. Nala soo xiriir tweakkan oo kala soo dejiso hoosta.
BerryC8 tweak waxaa loo soo saaray iPhone iyo iPad oo leh iOS 8
BerryC8 waa tweak cusub oo laga heli karo Cydia qalabka aaladaha macruufka ah taas oo u oggolaaneysa dadka isticmaala awood ay ku bilaabaan ama u furaan codsiyadooda tooska ah shaashadda quful ee iPhone-ka.
Tooshkaan Waxaad fursad u leedahay inaad ku hagaajiso iyada oo loo marayo Nidaamka iPhone ee qaybta loo yaqaan BerryC8. Qeybtaan waxaan fursad u heli doonnaa inaan ku xusho codsiyada aan rabno inaan ku helno shaashadda qufulka iyo inaan furino barnaamijyada waxaan si fudud u qabsan doonnaa dalabka illaa aan fartayada saarno lambarka Aqoonsiga ee aaladeheenna, soo saarista saamayn aad u fiican oo ka dhigaysa codsiyada kale ee aan diyaarka u nahay inaan ka furi karno shaashadda qufulka xirmaya BerryC8 sidoo kale waxay leedahay shaqo loogu talagalay dadka isticmaala ee aan haysan aaladda leh ‘ID ID’, taasoo keenaysa in nambarka amniga loo adeegsado haddii la habeeyo.
Tooshkaan Waxaa loo sameeyay iPhone 6 Plus oo leh iOS 8.1.2, si kastaba ha noqotee waxaa lagu tijaabiyey dhammaan aaladaha kale ee la jaan qaada macruufka 8. Xaqiiqdii, BerryC8 waa inay si sax ah uga shaqeysaa macruufka 7 iyo sidoo kale iPad Air, iPad iyo iPad mini, si kastaba ha noqotee, qaybta garaafka ee tweakkan waxaa laga yaabaa inaan si sax ah loo hagaajin. kiniiniyada shirkadda Kalifoorniya.
U soo dejiso bartanka BerryC8 ee loogu talagalay iPhone oo leh Jailbreak
Hadaad xiiseyneyso tigreegaan, BerryC8 Waxaa laga heli karaa Cydia gudaha bakhaarka BigBoss lacag la’aan. Xusuusnow si aad u rakibto tweakkaan waxaad u baahan tahay xiriir internet oo aad ku soo dejiso xirmada lagama maarmaanka ah iyo aaladda jabsiga, haddii aadan horey u sameyn oo aad xiisaynayso ha moogaanin Tilmaamaha isukeeniska aaladaha (iPhone, iPad) oo leh kombuyuutarrada Mac iyo Windows. Tweakkan wuxuu la jaan qaadayaa aaladaha leh iOS 8 iyo wixii ka sareeya.